Global Voices teny Malagasy » Isiraely: Korian’ny fianianana ho mahatokin’ny Firenena ny demaokrasia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2010 21:19 GMT 1	 · Mpanoratra Gilad Lotan Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Palestina, Fanoherana, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Politika
Nolanian'ny filankevitry ny governemanta Isiraeliana tamin'ny 22-8 ny volavolam-panitsiana  ny lalàna fizakana ny zo Isiraeliana, izay mitaky amin'ireo rehetra mangataka zom-pirenena ny fanekena an'Isiraely ho “fanjakana Jiosy sy demaokratika.” Mba hitoeran'izany ho lalàna moa dia tsy maintsy mandalo fifidianan'ny Knesset telo izany mandritra ireo volana ho avy ireo.
Nampisarantsaina aoka izany ny fikasana maro hanerena ny fanekena an'i Isiraely ho [firenena] Jiosy irery ihany, indrindra ho an'ireo Arabo mizaka zom-pirenena Isiraeliana, izay mandrafitra ny iray ampahadimin'ny mponina. Ny sasany miteny fa manaraka an-kitsirano ho mpanatanteraka ny politikan'ny antoko nasionalistan'i Avigdor Lieberman i Bibi Netanyahu . Ny hafa indray mahita fa lojika ny “tsy maintsy itakiantsika avy amintsika hoe Isiraely tahaka ny ahoana no takiantsika amin'ny hafa ho ekena”, raha itodihana ny takian'i Isiraely avy amin'ny Palestiniana  hanaiky azy ho Firenena Jiosy. Manameloka ity faneken'ny filankevitry ny governemanta ity ny filohan'ny Kadima Rtoa Tzipi Livni, mametraka azy ho “politika amin'ny endriny ratsy indrindra”  sy “adivarotra politika”.
Ao amin'ny bolongana i Orit Kamir no mampahatsiahy  antsika ireo lalàna izay tsy nekena taloha raha miresaka momba ity lohahevitra ity ihany:
Misy ny firenena demaokratika no mitaky fanaovana fianianana ho mahatoky avy amin'ireo olona vao mizaka ny zom-pireneny; mpifindra monina mangataka zom-pirenena. Misy ny firenena no mitaky amin'ireo mangataka zom-pirenena hianatra ny kolontsainy, ny tantarany ary ny fiteniny. Fitakiana mety sy ilaina izany. Tsy manao izany ny fanjakan'i Isiraely, satria tonga dia manome ny fizakana zom-pirenena amin'ny Jiosy izy, tsy manontany zavatra hafa ankoatra ny fivavahany.
Tsiary ara-tantara: Nandritra ny taompolo 80 i Meir Kahana no niantsoantso nanohitra ny fanambarana fijoroana maha-firenena, nitaky ny hanafoanana ny fizarana miresaka momba ny fitoviana (‘Fanjakana ho an'ny olom-pireneny rehetra’), ka ny fanambarana Sionista ara-pivavahana sady tsy demaokratsika sisa miangana. Napetraka ho tsy manara-dalàna ny antokony, ka nomelohinia ampahibemaso izy. Fa inona no nitranga no tsy nahita ilay trambo nandady tsikelikely tahaka izao isika 20 taona taty aoriana?
Nahangona Isiraeliana hanohitra ny volavolan-dalàna ity Vondrona Facebook  ity. Toy izao manaraka izao ny resadresaka teo amin'ny mpikambana tao amin'ny vondrona Isiraeliana sy ny Isiraeliana mpanohitra:
Dean Michaely  :
Tsy ekenareo ve ry zalahy i Isiraely ho firenena Jiosy sy demaokratika? Tsy ekenareo ny fanambaram-pahaleovantenan'i Isiraely? Mialà ary eto.
Satria izay rehetra ataonay, tahaka ny firenena rehetra manerantany ihany, indrindra amin'ny firenena ambavaloza lalandava tahaka ny antsika, dia ny mitaky olom-pirenena hianiana fa hiaro sy hitandro ny firenena. Tsotra ny antony – misy ny olona nahazo ny fizakana maha-olompirenena dia manapoakbaomba ny tenany na mitifitr'olona ankarihary, sady miteny fa tsy ekeny ny zon'ity firenena ity hijoro. Isika kosa ny azontsika atao, dia ny manivana am-boalohany, mba hanekena ny firenentsika sy ny fisiany – Jiosy sy demaokratika.
Barak Granot  :
Oviana moa no nisy olona nanapoaka ny tenany na nitifitra teto farany? Efa ela ny an'i Baruch Goldstein. Tahaka izany ihany koa ny Raby Uzi Meshulam. Angamba ny tianao lazaina dia ny andian-jiolahy mpanapoaka fiara? Sa miresaka momba an'i Eden Natan Zadeh izay nitifitra tany an-tanànan'ny Arabo-Isiraeliana? Andraso aloha… Olom-pirenena Isiraeliana feno anie ireo e. Ka inona marina moa no tena takianareo?
Daniel Oz  :
I Bibi & Lieberman no tsy manaiky an'i Isiraely ho JIosy sady demaokratika, fa raha tsy izany tsy nanolotra lalàna fasista toy izao ireo, izay miampanga tsy fitokisana ny mahajiosy an'i Isiraely, ka mahatonga ny fikasana hanafoana ny demaokrasia ka hanohana ny mponina/foko Jiosy.
Ziv Gur-arye  :
Ny firenentsika dia maro tsy tia (tsy ny Arabo ihany) tsy manaiky ny fijoroany ary mitoky mitoky amin'ny fahavalom-pirenena (saingy faly izahay raha miova hevitra ry zareo any aoriana any, na dia kely dia kely aza ny herijika ho amin'izany raha jerena ny fifehezan'ny Hamas tanteraka an'i Gaza).
Tokony ho izay mihevitena ho Jiosy ihany no honina eto. Hijoro any aoriana any ny Fanjakana Palestiniana ka any no honenan'izay mihevitena ho Palestiniana rehetra. Any Etazonia na any amin'ny firenena hafa dia tsy maintsy mianiana ho mahatoky ny fireneny ny olona any. Nahoana no misy ny ekstremista izay manohitra io volavolandalàna io?
Raha tena te-hiaro ny demaokrasia ianao dia mila manaja ny fianianana ary mitaky izany avy amin'ny mizaka zom-pirenena Isiraeliana rehetra tsy anavahana volonkoditra na mahalahy sy vavy.
Dean  mamaly ihany koa:
Diso amin'ny zavatra maro ianao ry Barak. Nomena ho an'ny Jiosy i Isiraely ary i Palestina ho an'ny Palestiniana. Ny mahatonga ny Arabo honina eto dia tsara dia tsara ny [tambin-karama] fikarakarana avy amin'ny fitondrana eto raha ampitahaina amin'izay mety ho azony avy amin'ny firenena Arabo rehetra.
Daniel Oz – tsy volavolandalàna fasista io ka. Misy any amin'ny firenena maro tsy fasista io. Firenena demaokratika jiosy no eto fa tsy demaokratika silamo. Izay ny natoiran'ity firenena ity na tiantsika na tsia.
Ary eo ihany anie e, lany tamina safidy demaokratika anie ilay volavola, tahaka ny nanafoanana ny lalampanorenana Tiorka… Koa arahabao i Bibi noho ny maha-demaokratika ny volavolan-dalàny.
Indreto indray avy amin'ny Twitter:
Raha tsy misy fahatokisana (loyauté), dia tsy misy ny fizakana maha-olompirenena. Isika no hizaka io didy io.
Irwunsch  namindra ny nosoratan'i sethacohen33 :
Tsy hoe te-hiady fa manana fianianana hahatoky ny firenena ny any Etazonia. Frantsa ihany koa. Maro ny firenena tandrefana no manana fianianana ho mahatoky.
Bradley Burston manangona ny lisitry ny azo atao  mba hampiatoana ilay lalàna:
Tsy maintsy mahazo ny fanohanan'ny Likud [toerana 27] sy ny Antokon'ny Mpiasa  ny lalàna raha tiana ho lany. manorata any amin'ny Praiminisitra sy ny mpitarika ny Likud Benjamin Netanyahu ary amin'ny Minisitry ny Fiarovana ary ny mpitarika ny Antokon'ny Mpiasa hanakanan'izy ireo ity lalàna ity. Azo jerena ao amin'ny vohikalan'ny Knesset ny adiresy imailakan'ny mpikambana ao amin'ny Likud tsirairay amin'ny alalan'ny fanindriana ny anarany. Efa nanohitra ampahibemaso ny voady ho mahatoky ny firenena ny loholona Likud MKs Benny Begin, Dan Meridor ary Michael Eitan, tahka ny Mpitondratenin'ny Knesset dia Atoa Reuven Rivlin. Inoana ho mailomailo amin'izy ity ny hafa, ary mety tsy handrotsa-bato na hiezaka tsy hahatonga ny volavolandalàna handingana ny tokonam-baravaran'ny Knesset.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/26/10233/
 manaraka an-kitsirano ho mpanatanteraka ny politikan'ny antoko nasionalistan'i Avigdor Lieberman i Bibi Netanyahu: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/victory-for-israel-s-right-as-jewish-state-loyalty-oath-nears-vote-1.317565
 takian'i Isiraely avy amin'ny Palestiniana: http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE6955MC20101006?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0
 “politika amin'ny endriny ratsy indrindra”: http://www.haaretz.com/news/national/livni-loyalty-oath-amendment-is-politics-at-its-worst-1.318219
 no mampahatsiahy: http://www.notes.co.il/orit/52775.asp
 Vondrona Facebook : http://www.facebook.com/event.php?eid=117432431651398